Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » uhambo ngomoya » Abantu aba-4 babulawa kwingozi yenqwelomoya yaseConnecticut
Airlines • uhambo ngomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • iindaba • Xanduva • Safety • Tourism • Intetho yezoKhenketho • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Abantu abane babekhwele kwinqwelomoya, kuthiwa yindiza yeshishini iCessna Citation, ngokolwazi oluvela kwi-Federal Aviation Administration (FAA).
Isicwangciso siwele kwisakhiwo soshishino e-Connecticut.
Bonke abantu abakwibhodi yeshishini leCessna Citation babulawa kwingozi.
Abacimi-mlilo balapha bajongene nomlilo oqale ngengozi.
Amaqela okuhlangula eFasington, e-Connecticut alwa nomlilo kwindawo yezamashishini eqale emva kokuba inqwelo moya yeshishini iCessna Citation ingene kwesi sakhiwo ngoLwesine kusasa, ngokucacileyo ibulala bonke abantu ababekhwele.
ISebe lamaPolisa laseFarmington liqinisekisile ukuba inqwelomoya yangena kwisakhiwo esikwiHyde Road, yatsho nakwitwitter ukuba iinkonzo zikaxakeka bezisemhlabeni zisebenza "ukukhupha indawo ekufutshane".
Abantu abane babekhwele kwinqwelomoya, kuthiwa yindiza yeshishini iCessna Citation, ngokolwazi oluvela Ulawulo lwezoLawulo lwezoPhapho (i-FAA). Akukho namnye kwaba bane kucingelwa ukuba usindile.
Abantu abane babekhwele kwinqwelomoya, kuthiwa yindiza yeshishini iCessna Citation, ngokolwazi oluvela kwi-Federal Aviation Administration (FAA). Akukho namnye kwaba bane kucingelwa ukuba usindile.
Ngokwengxelo yamapolisa aseFarmington, khange kubekho monakalo uxeliweyo ngaphakathi kwesi sakhiwo, esingumnini wezixhobo zaseJamani iTrumpf.
Kwimifanekiso ekwabelwana ngayo ukusuka kumabala eendaba ezentlalo, umsi unokubonakala uvela kwindawo yengozi, abacimi-mlilo bequbisana nomlilo omkhulu ovele kwelinye icandelo lesakhiwo.
IFarmington ikwiHartford County yaseConnecticut, malunga neekhilomitha ezili-10 (16km) ukusuka kwikomkhulu likarhulumente.